ဟန်ပြနှင့်အထောက်အပံ့ site ကို plugin ကို transposh.org wordpress ကို
Widget လေးထားချင်ရင် Showcase
သိုထား “trac” ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏
ဒီဇင်ဘာလ 11, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
သင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း, မြန်ဆန်ပြီးထောက်ခံမှုရရန်နှင့်အသစ်ကိစ္စများကိုလေ့လာအကြောင်းကြားရချင်တယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာဖို့အခမဲ့ခံစားရ twitter ရောက်ရှိနေသော.
သင်ကအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လိုလျှင်, တခြားသူတွေကိုကူညီခြင်းနှင့် transposh ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်. ဝါကြွားချင်တယ်, ငါတို့သည်ယခုအပေါ် page တစ်ခုရှိသည် facebook မှာ.
သင်က developer များဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရန်လိုပါလျှင်, သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုအစွန်းပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုလာမယ့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trac site ကိုလိုက်နာ trac တဲ့ RSS.
သင်ဒီ site ပေါ်တွင်ကြေငြာချက်များအတိုင်းလိုက်နာချင်တယ်ဆိုရင်, ထို RSS ကိုအမှတ်သင်္ကေတ (အောက်တွင်သို့မဟုတ်သင့် browser ရဲ့လိပ်စာလိုင်းမှာဖြစ်စေ) သင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏. သင်သည်သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဘာသာစကား၌ဤအစာကျွေးရလိမ့်မယ်.
မှတ်ချက်များကိုအမြဲလွန်းကိုလက်ခံနေကြတယ် (နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ပြန်ရရန်ကြိုးစား). သင်သည်အခြားအကြံပြုချက်များ / စိတ်ကူးများ / အကြံပြုခြင်း / သတ္တိပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရှိပါက – ပဲကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: facebook မှာ, RSS, လူမှုရေး, trac, twitter ရောက်ရှိနေသော
ချိတ်ဆက်ခြင်း စုဆောင်း: ဒင်္ဂါးပြား, တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်ပိုပြီး!
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [77b28fe]: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ admin ရဲ့စာမျက်နှာများကနေနှောင့်အယှက် 3rd ပါတီအသိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားပါ, အသုံးဝင်သော ... သြဂုတ်လ 10, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [6bbf7e2]: update ကိုဘာသာပြန်ချက်ဖိုင်တွေ သြဂုတ်လ 4, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [f039333]: bugbugpot သြဂုတ်လ 4, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [0688c7e]: ဘာသာစကား name ကို, မဟုတ်ကုဒ် သြဂုတ်လ 3, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [7a04ae4]: backend အယ်ဒီတာအတွက် filter များ၏ဖယ်ရှားရေး Allow သြဂုတ်လ 3, 2018
Recent Comments တွေကို
Vidyut အပေါ် version 1.0.2 – သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာငါ့ကိုပြောပြပါနဲ့ငါ…
ကမ်းလှမ်းမှု အပေါ် version 1.0.0 – အချိန်ရောက်လာပြီ
ကမ်းလှမ်းမှု အပေါ် version 1.0.1 – သင့်ရဲ့ Widgets တွေ, သင့်ရဲ့လမ်း
Olivier အပေါ် version 1.0.2 – သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာငါ့ကိုပြောပြပါနဲ့ငါ…
အပြင်ထွက်သည် အပေါ် version 1.0.1 – သင့်ရဲ့ Widgets တွေ, သင့်ရဲ့လမ်း
0.7 APC backup လုပ်ထားန်ဆောင်မှု Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ မှေးနေ့ buddypress bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ css ကို sprite များ လှူဒါန်းခဲ့ဘာသာပြန်ချက် လှူဒါန်းမှုများကို eaccelarator facebook မှာ အတုအင်တာဗျူးများ အလံ sprite များ gettext google-XML-Sitemap ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း jQuery ဗိုလ်မှူး အသေးအဖွဲ ပိုဘာသာစကားများ parser ကို လွှတ်ပေး replytocom RSS ရှာဖွေရေး securityfix ဒီနည်းကို လူမှုရေး မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ စတင် trac twitter ရောက်ရှိနေသော UI ဗီဒီယို widget က wordpress.org wordpress ကို 2.8 wordpress ကို 2.9 wordpress ကို 3.0 wordpress မှာ plugin wp-super-cache ကို xcache
အသုံးပြုဒီဇိုင်းကို LPK စတူဒီယို
entries (RSS ကို) နှင့် comments (RSS ကို)